Liibaan Fantastic June 21, 2018
(Europe) 21 Juunyo 2018 Waxaan dib u amba qaadi doonnaa xubinteenii Saakay iyo Wargeysyada oo inoo socon doona inta uu ka xiramayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda insha’alaah.
Wakiilka Gareth Bale ayaa u gudbiyay maamulka Real Madrid in laacibka loo damaanad qaado inuu ciyaarayo waqti badan haddii uu sii joogayo kooxda xiliciyaareedka cusub (Sky Sports).
Petr Cech ayaa iska diidaya inuu amaah ugu dhaqaaqo kooxda Napoli kadib markii Arsenal ay la soo wareegtay badalkiisa oo ah Bernd Leno (CalcioMercato).
Juventus ayaa u muuqata mid Wolves ku garaacday saxiixa daafaca midig ee kooxda Valencia Joao Cancelo kaas oo amaah ugu ciyaarayay Inter Milan, kooxda tababare Allegri ayaa ku soo afjaraysa saxiixa 24 jirkaan reer Portugal lacag dhan 38 ilaa 40 milyan oo euro (Di Marzio).
Liverpool ayaa rajaynaysa saxiixa xiddiga qad dhexe kooxda Aston Villa ee Jack Grealish, Xili Tottenham ay diiday inay ku bixiso 22 jirkaan wax ka badan 20 milyan oo Ginni (The Sun).
Tottenham ayaa qayb ka noqotay tartanka loogu jiro saxiixa daafaca Barcelona ee Jordi Alba (Diario Sport).
Manchester United ayaa loo sheegay inay kula wareegi karto daafaca dhexe ee Bayern Munich ee Jerome Boateng oo 29 jir ah lacag dhan 50 milyan oo Ginni (Manchester Evening News).
Xiddiga Chelsea ee Ruben Loftus-Cheek oo 22 jir ah ayaa sheegay inuu ka tagi karo xaggaagan kooxdiisa si uu ugu biiro koox uu ka heli karo boos joogto ah, wuxuu ka soo laabtay amaah uu ugu ciyaarayay xiliciyaareedkii dhamaaday kooxda Crystal Palace, wuxuuna haatan diirada u saaran yahay Newcastle United (Mirror iyo Shields Gazette).
Inter Milan ayaa ku dhaw inay la wareegto 30 jirka qadka dhexe ee kooxda Roma Radja Nainggolan (CalcioMercato).
Arsenal ayaa gabo gabo marsiinaysa saxiixa laacibka xulka Uruguay iyo kooxda Sampdoria ee Lucas Torreira kaas oo ay ku qaadanayso 30 milyan oo euro sida uu xaqiijiyay madaxwaynaha kooxda reer talyaani (Evening Standard).
Manchester City ayaa rajaynaysa in isbuucaan ay soo afjarto saxiixa xiddiga Napoli ee Jorginho kaas oo ay ku la soo wareegayso lacag dhan 46.5 milyan oo Ginni (Mirror).
Juventus ayaa dalban doonta lacag dhan 70 milyan oo Ginni si ay u fasaxdo Miralem Pjanic oo 28 jir ah kaas oo diirada u saaran Chelsea iyo Barcelona (Corriere dello Sport).
Liverpool iyo Tottenham ayaa qarka u saaran inay waayaan saxiixa 21 jirka reer Brazil ee Malcom, Inter Milan ayaa ku dhaw inay amaah ku qaadato xiddiga kooxda Bordeaux, gabo gabo ayeeyna marsiinaysaa saxiixiisa (Sky Italia).
Tababare Steven Gerrard ayaa doonaya inuu kooxdiisa Rangers geeyo Jon Flanagan oo ay saaxiibo ku ahaayeen Liverpool, daafaca ayaa la filayaa inuu qaab bilaash ah ugu biiro kooxda Rangers kadib markii uu ka gudbay tijaabada caafimaadka (Mail).
Real Madrid ayaa la saxiixatay labo kamid ah caruurta weerar yahankii hore ee Chelsea iyo Barcelona ee Eidur Gudjohnsen (Marca).
Waxaa kuu Diyaariyay: Liibaan Adan Yarow (Fantastic)
DAAWO: Sidii loo ceebeeyay xalay Gerard Pique!
DEG DEG: Emre Can oo gaaray Turin iyo laacibka oo maraya tijaabada caafimaadka +SAWIRRO